Himalaya Dainik » को थिए भगवान शिवका मातापिता ?
योपनि- सोमबार भगवान शिवको विशेष दिन,यस कारण बस्नुपर्छ सोमबार व्रत !
कुनै पनि खालको व्रत वा उपवासले शारीरिक स्वास्थ्यमा प्रतक्ष प्रभाव पार्ने कुरा जो कोही पनि अनभित्र छैन ।समय समयमा व्रत बस्नाले शरिरलाइ फाइदा पुर्याउँछ। व्रतको धारणा परापुर्वककालका ब्राह्मणहरुले ‘ब्राह्मण धर्म’ प्रति मानिसलाइ आकर्षित गर्न प्रयोग गर्थे। यसले शारिरीक स्वास्थ्यलाई नै राम्रो बनाउने हुँदा व्रत गर्ने आफैले नै अनुभव गर्नसक्ने हुँदा हजारौं वर्षदेखि चलिआएकै परम्पराले अहिले पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।